आजको पहिलो खेलमा इङ्ल्याण्ड र चेक रिपब्लिक भिड्ने, कसले जित्ला खेल ? - MeroKhelkud
आजको पहिलो खेलमा इङ्ल्याण्ड र चेक रिपब्लिक भिड्ने, कसले जित्ला खेल ?
२०७८ असार ८ गते २०७८ असार ८ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर558LeaveaComment on आजको पहिलो खेलमा इङ्ल्याण्ड र चेक रिपब्लिक भिड्ने, कसले जित्ला खेल ?
काठमाडौं, असार ७ : युरोकप २०२० अन्तर्गत आज समूह डी अन्तर्गतका दुई खेल हुँदैछन् । लन्डनमा चेक गणतन्त्र र घरेलु टिम इंग्ल्यान्ड तथा ग्लाजगोमा घरेलु टिम स्कटल्यान्ड र क्रोएसियाबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। दुवै खेल राति १२:४५ बजे हुनेछ।
वेम्बली स्टेडियममा हुने खेलमा इंग्ल्यान्ड चेक रिपब्लिकलाई हराउँदै नकआउट चरणमा पुग्ने योजनामा रहेको छ। यसअघि २ खेलबाट ४ अंक जोडेको इंग्ल्यान्ड समूहको दोस्रो स्थानमा छ। आज यी दुबै टोलीबीचको खेल निकै प्रतिस्पर्धात्म हुने अपेक्षा गरिएको छ।
इङ्ल्याण्ड र चेक रिपब्लिकले यसअघिका दुई खेलमा अपराजित रहँदै समान ४ अंक जोडेका छन् । इङ्ल्याण्डले क्रोएसियालाई १–० ले पराजित गरेको थियो भने स्कटल्याण्डसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको थियो । चेक रिपब्लिकले पहिलो खेलमा स्कटल्याण्डलाई १–० ले पराजित गरेको थियो भने दोस्रो खेलमा क्रोएसियासँग बराबरी खेलेको थियो ।
यी दुईबीचको हालसम्म भएका चार खेलमा इंग्ल्याण्डले दुई खेल जित्दा चेक रिपब्लिकले १ खेल जितेको छ भने अर्को एक खेल बराबरीमा सकिएको छ।
स्पेनमा हुने त्रिकोणात्मक शिरिजको लागि नेपाली टिमको अभ्यास सुरु ( फोटो फिचर )
क्रोएसिया नकआउट चरणमा, निर्णायक खेलमा स्कटल्यान्ड ३-१ ले पराजित
नेपालले साफ च्याम्पियनसिपको तयारी कतारमा गर्ने
२०७८ भाद्र ११ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर
युरो कप खेल्ने जर्मनीको टोली घोषणा, थोमस मुलर र हुमल्सको पुनरागमन
२०७८ आश्विन १० गते २०७८ आश्विन १० गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर